OpenANX စျေး - အွန်လိုင်း OAX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OpenANX (OAX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OpenANX (OAX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OpenANX ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
OAX – OpenANX
Market ကဦးထုပ်: $3 926 293.00
volume_24h_usd: $808 550.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OpenANX တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OpenANX များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OpenANXOAX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.167OpenANXOAX သို့ ယူရိုEUR€0.141OpenANXOAX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.128OpenANXOAX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.152OpenANXOAX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.49OpenANXOAX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.05OpenANXOAX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.68OpenANXOAX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.62OpenANXOAX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.221OpenANXOAX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.233OpenANXOAX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.73OpenANXOAX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.29OpenANXOAX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.908OpenANXOAX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹12.51OpenANXOAX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.28.14OpenANXOAX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.229OpenANXOAX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.254OpenANXOAX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.19OpenANXOAX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.16OpenANXOAX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥17.85OpenANXOAX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩197.86OpenANXOAX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦64.26OpenANXOAX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.27OpenANXOAX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.6
OpenANXOAX သို့ BitcoinBTC0.00001 OpenANXOAX သို့ EthereumETH0.000435 OpenANXOAX သို့ LitecoinLTC0.00307 OpenANXOAX သို့ DigitalCashDASH0.00184 OpenANXOAX သို့ MoneroXMR0.00188 OpenANXOAX သို့ NxtNXT13.03 OpenANXOAX သို့ Ethereum ClassicETC0.0246 OpenANXOAX သို့ DogecoinDOGE48.22 OpenANXOAX သို့ ZCashZEC0.00203 OpenANXOAX သို့ BitsharesBTS5.15 OpenANXOAX သို့ DigiByteDGB5.35 OpenANXOAX သို့ RippleXRP0.593 OpenANXOAX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00576 OpenANXOAX သို့ PeerCoinPPC0.554 OpenANXOAX သို့ CraigsCoinCRAIG76.14 OpenANXOAX သို့ BitstakeXBS7.13 OpenANXOAX သို့ PayCoinXPY2.92 OpenANXOAX သို့ ProsperCoinPRC20.97 OpenANXOAX သို့ YbCoinYBC0.00009 OpenANXOAX သို့ DarkKushDANK53.63 OpenANXOAX သို့ GiveCoinGIVE361.94 OpenANXOAX သို့ KoboCoinKOBO38.07 OpenANXOAX သို့ DarkTokenDT0.154 OpenANXOAX သို့ CETUS CoinCETI482.66
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 11:35:02 +0000.